Intsha yasoThongathi ixwayisa umphakathi ngobugebengu nezidakamizwa | News24
Intsha yasoThongathi ixwayisa umphakathi ngobugebengu nezidakamizwa
Photo: ANDILE SITHOLE Baxwayisa intsha nomphakathi ngobugebengu nezidakamizwa (kusukela kwesobunxele) nguSamkelo Nombolo, Lindo Thunzi noNhlakanipho Malinga.
UKWANDA kwezigameko zobugebengu kanye nokwenyuka kwezinga lezingane ezingena ezidakamizweni emiphakathini yaseNingizimu Africa, sekugqugquzele intsha yasoThongathi ukuthi ikhiphe ividiyo (video) exwayisa umphakathi ngobungozi bezidakamizwa nobugebengu.
Le video esihloko sithi Ngiyokhohlwa Ngifile, ididiyelwe yintsha yasendaweni yakwa Gwala, ngaphandle kwedolobha uThongathi ngenhloso yokufundisa umphakathi ngempilo yabantu abasha abasuka ezindaweni zasemakhaya bezoqala impilo entsha edolobheni.
UMnu. Lindo Thunzi (22) okunguye obhale lomdlalo uthe lesiqephu siveza impilo yentombazane ehluphekayo esuka endaweni yasemakhaya iyozama impilo engcono edolobheni. Ngenxa yokungabi nalo ulwazi ngempilo yasedolobheni, ithi uma ifika elokishini ihlangana nomuntu wesilisa oyithembisa ukuyinika impilo engcono. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi lona wesilisa ugcina eyihlukumeza eyibhangqa nabanye abantu wesifazane. Lokhu kugcina kuholela ekutheni lentombazane ibone ubunjalo balona wesilisa ethandana naye, lokho okugcina ngokuthi imlaxaza ithandane nomunye umuntu wakhona endaweni,” usho kanje.
UThunzi uthi waqala ukuba nombono wokuqopha umdlalo ngempilo yomuntu osuka emakhaya eza edolobheni ngoZibandlela (December) wonyaka odlule ngemuva kokuthi ebuke ukwenyuka kwezinga lobugebengu endaweni abahlala kuyo. “Ngibe sengiqhamuka nombono wokuqopha umdlalo ozokhombisa izinto ezenzeka empilweni. Kuthe uma ngibonisana nabanye abafowethu ngabhala lomdlalo okhuluma ngempilo yentombazane esuka endaweni yasemakhaya ehluphekayo ifike elokishini ihlangane nowesilisa oyithembisa izulu nomhlaba.”
Uqhube wathi inhloso enkulu yokuqopha lomdlalo ukuxwayisa intsha yasendaweni ukuthi ingangeni ezidakamizweni kodwa iphokophelele ukuya phambili. Uqhube wathi: “Ngibe sengibona kungcono ngiqhamuke nento ezokwenza indawo yangakithi ibukeke iyindawo ehlala abantu abanamakhono. Lombono wokuqopha lomdlalo wangifikela ngizihlalele ekhaya ngicabanga ngezinto ezenzeka empilweni ngibuka nempilo yomuntu osuka emakhaya eza edolobheni. Isiqephu sonke sigxile ezintweni esizibona zenzeka empilweni zonke izinsuku,” usho kanje.
UMnu. Nhlakanipho Malinga (22) ongomunye wabalingisi kulomdlalo utshele leliphephandaba ukuthi bonke abalingisi ababambe iqhaza baqhamuka endaweni yakwa Gwala.
“Sesisonke siyi-16 futhi bonke laba bantu baqhamuka endaweni yakwa Gwala. Inhloso enkulu yethu wukuqwashisa umphakathi kanye nentsha yakithi ngokudlanga kwezenzo zobugebengu. Kusiphatha kabi kakhulu ukubona izingane eziqhamuka ezindaweni zasemakhaya zigcina zidla izidakamizwa ezinye ziba mdibi munye nezigebengu uma zifika emadolobheni ngoba zingayijwayele impilo esheshayo. Lokhu kuzenza ziphile enye impilo egcina iba nomthelela ongemuhle ezimpilweni zazo. Lomdlalo ungowoqala esiwuqophile futhi sizimisele ukuqhubeka sibhale neminye sikhombise izinto ezenzeka emiphakathini kanye nasezimpilweni zabantu. Siqoqe intsha yasendaweni sayichazela ngomdlalo esihlose ngawo ukuveza impilo yasendaweni. Kusithokozise kakhulu ukubona abantu abaningi beba nesasasa elikhulu entweni esiyenzayo lokho kuyasigquqguzela ukuthi siqhubekele phambili,” ephetha.
Ukuqoshwa mayelana nalomdlalo kuyatholakala nasenkundleni zokuxhumana u-Facebook, Ngiyokhohlwa Ngifile noma ungaxhumana noNhlakanipho Malinga kule nombolo 074 629 2802.